लोक दोहोरी कुइन पार्वतीराईसंगको माइण्ड नै फ्रेस गर्ने रमाइलो कुराकानी | onlineharpal.com
लोक दोहोरी कुइन पार्वतीराईसंगको माइण्ड नै फ्रेस गर्ने रमाइलो कुराकानी
on: ३० बैशाख २०७४, शनिबार २२:१६ In: bignews1, अन्तर्वाता
आदरणीय दर्शक स्रोता देशको चर्चित सेलिब्रिटीहरुसंग मिठो मिठो कुरा कानी गर्ने क्रम सिलसिलाबद्व रुपमा जारि छ आज पनि हामीले नयाँ अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेका छौ। उहाँ नेपाली सांगीतिक अकासकी एक चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई लोकदोहोरी क्षेत्रकी नायिका पनि भनिन्छ, उहाँ नेपाल कै डान्स कुइनको रुपमा पनि चिर परिचित हुनुहुन्छ उहाँहुनुहुन्छ मोडल पार्वती राइ आउनुहोस उहाँलाई खबर कोसेली डटकममा स्वागत गरौ।
यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ खबर कोसेली डटकममा।
– नमस्कार, धेरै धेरै धन्याबाद।
पार्वती राइ यति खेर के गर्दै छ ?
– अहिले चाहि म यो सिटि सेन्टर अगाडिको कमल पोखरीमा सुटिङमा ब्यस्त छु। उता सुटिङ भाइ राखेको छ म चाहि यता इन्टरभ्युमा व्यस्त।
यहाँको स्वभाब चाही कस्तो छ त ?
– मान्छे अनुसारको हुन्छ मेरो त स्वभाब चेन्ज भइराखेको हुन्छ। हसिली, खुसिली, रमाइलो पनि छु सिरियस पनि हुन्छु समय अनुसार मोड अनुसार भर पर्छ अलि मुडी छु।
यहाँको जीवनमा घटेको एउटा सुखत क्षण बाताई दिनु हुन्छ कि ?
– सुखद क्षणहरु धेरै छन् म कुनै कुरामा धेरै खुसि पनि हुन सक्दिन धेरै दुखि पनि हुन सक्दिन एकदम नर्मल टाइपको छु त्यस्तो कुराहरु म याद पनि गर्दिन यादै हुदैन।
फुर्सदको समयमा चाहि के गर्नु हुन्छ ?
– फुर्सदको समयमा म अलि फिल्म क्रेजी छु मुभीहरु हेर्न जान्छु। साथीहरुसंग ग्यादरिङ गर्छु र घरमा भएको बेला चाहि घर सरसफाई गर्न एकदम रमाउँछु र किताबहरु पढ्छु उपन्यासहरु पढ्छु।
यहाँको नयाँ कोसेली भरखरै ताजा के आउँदै छ ?
– भरखरै निस्केको छ सुदुर पश्चिमको देउडा गीत घर मेरो परदेश नम्बर सात भन्ने बिनोद बाजुराली जीको र बिस्नु माझि जीको र डाइरेक्सन संकर बिसी उहाँ आफै मोडल र म पनि भाको त्यो नयाँ देउडा गीत आउँदै छ।
धेरै स्टेज प्रोग्रामहरु गर्नु हुन्छ दर्शकहरुले धेरै मन पराउनु हुन्छ कुनै त्यस्तो रमाइलो स्टेज प्रोग्राम छ ?
– रामाइलो भन्दा पनि कामको बढी प्रेसर हुन्छ कसरी त्यहाँको दर्शकलाइ मनोरन्जन दिने हन्ड्रेड पर्सन राम्रो कसरि दिने भन्ने तिर मात्र सोच हुन्छ उहाँहरु रमाउनु भए पछि अबियस्ली म त रमाउने नै भाइहालें।
पार्वती राइलाइ खुसि पार्न चाही के गर्नु पर्छ ?
– मलाइ खुसि पार्न म सानो सानो कुरामा पनि चाडै खुसि भइहाल्छु जेहोस यहि हो भन्ने कुरा चाहि छैन।
प्रेमलाई कसरी परिभाषा गर्नु हुन्छ ?
– प्रेम दुइवटा आत्मा बिचको सम्बन्ध हो भनुम न।
जीवनलाइ परिभाषा गर्नु पर्दा ?
– यो एउटा तालमेल हो तालमा नाच्न जान्यो भने सफल भइन्छ तालमा नाच्न जानेन भने असफल भइन्छ।
यहाँलाइ मनपर्ने ठाउँ मध्ये कुन हो ?
– पोखरा धेरै सुटिङमा गइराख्छु कुल लाग्छ आनन्द फिल हुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरिमा त्यस्तै अलिकति चिसो चिसो ठाउँहरु मन पर्छ गर्मि ठाउँमा चाही बस्न सक्दिन ।
यहाँलाइ मन पर्ने पहिरन ?
– सारी, लेहेंगा त्यस्तै हो।
यहाँलाइ आफ्नो असल गुण चाहि के हो जस्तो लाग्छ ?
– कुनै कुरामा पनि नआत्तिने बिस्तारी आनन्दसंगले काम गर्ने, आफ्नै सुरको कुनै काम गरेँ भने त्यसलाइ सफल पारेरै छोड्छु।
तपाईलाइ डान्सको विधा मध्ये अत्यधिक मन पर्ने चाही कुन हो ?
– सबै मन पर्छ मलाइ त म एउटा नृत्याँङगना भए पछि जुन सुकै किसिमको डान्स गर्न सक्ने खुबी हुनु पर्छ कुसल डान्सर हुनलाई सबै गर्नै पर्छ गर्छु पनि।
मिठो परिकार बनाउनु पर्दा के बनाउनु हुन्छ ?
– बनाउनु त सबै बनाउछु तर कुन मिठो भन्ने कुरा चाही आफैलाइ थाहा छैन आफैले बनाको आफैलाई मिठो लाग्छ।
कुनै रमाइलो यात्रा सम्झिनु पर्दा ?
– धेरै ठाउँ गइयो खास त्यस्तो सम्झनामा आएन सबै ठाउँ समाइलो नै भाथ्यो।
यहाँको फ्यान फलोअर चाही कतिको छ त ?
– राम्रै छन धेरै नै हुनुहुन्छ।
तपाइले फोनमा झुट बोल्नु भाछ ?
– बोले होला कुनै कुनै झुट चाही राम्रो हुन्छ भने बोलिदिन्छु तर झुट बोलेर कसैको मन दुखाउने र दुख दिने काम चाही गर्दिन।
कस्तो अबस्थामा झुटको साहारा लिनु हुछ ?
– यहि ठाउँमा यहि बेलामा भन्ने त हुदैन तर कुनै कुनै ठाउँमा चाही कुनै झुटले कसैको लाइफ राम्रो हुन्छ भने चाही बोलि दिन्छु।
सम्झिनु पर्दा कसलाई सम्झिनु हुन्छ ?
– मेरो ड्याडी ममीलाई।
जीवन साथि कस्तोहोस जस्तो लाग्छ ?
– असल, असल भएपछि सबै गुण त्यसैमा हुन्छ।
झरीमा रुझ्नु भाको छकि छैन ?
– झरीमा रुझेको छु सुटिङहरुमा कहिले कहिँ झरीमा रुझेको सीनहरु गर्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला पानीमा रुझ्दै नाचेको पनि छु।
यहाँको मन पर्ने फेस्टिभल चाही कुन हो ?
– दशैँ तिहार, तिहार स्पेसल्ली अनि तीज पनि किन भने तीजमा राम्रै कमाइ हुन्छनि त।
तपाईको जन्म दिनको पहिलो वुइस कसले गर्नु हुन्छ ?
– मेरो मम्मी पापाले नै गर्नु हुन्छ जहिले पनि अनि मेरो भाइ र मेरो एकै दिन हो जन्मदिन अनि भाइ र मेरो चाही हान थाप भइ राखेको हुन्छ कसले पहिला वुइस गर्ने भनेर।
यहाँलाइ कुनै त्यस्तो सरप्राइज गिफ्टको क्षण छ ?
– एक चोटी सानो हुँदा सपनामा ड्याडीले मलाइ खासाबाट ठुलो गुडिया ल्याईदिएको देखेको थिएँ उहाँ खासा पनि जानु भाको थियो र ड्याडी आइ पुग्ने बितिकै मैले सपनाको कुरा ड्याडी मलाइ गुडिया ल्याई दिनु भो भनेर सोधेको तर ड्याडीले साँचिकै ठुलो गुडिया सरप्राइज गिफ्ट ल्याईदिनु भा रैहेछ त्यो चाहि एउटा संजोक थियो।
यहाँलाइ लभ कि अरेन्ज म्यारिज मन पर्छ ?
– लभ पछि अरेन्ज र एरेन्ज पछि लभ दुवै राम्रो हो आआफ्नो ठाउँमा राम्रो छ।
तपाइले आफ्नो पहिलो कमाइले के गर्नु भो ?
– मैले डान्स कम्पिटिसनमा सेकेण्ड भएर २५ थाउजेन्ट जितेको थिए सबै ममीलाइ दिएँ।
आमाको खल्तीबाट थाहा नपाइ पैसा झिक्नु भाछ ?
– ममीकोबाट चाहि हैन ड्याडीको खल्तीबाट चाही धेरै चोटी निकालेको छु किन भने ड्याडीले कहिले पैसा गन्नु हुन्नथियो सिरानी मुनि राख्नु हुन्थ्यो त्यहाँबाट अलि अलि निकाल्थे।
बाल्यकालमा गरेको कुनै त्यस्तो उत्पट्याङ घटना छ ?
– अँ मेरो साथी थियो एकजन मईच्याँङ अनि अर्को गंगा भन्ने हामी यति उत्पट्याङ थियौ कि त्यो टिभीमा आत्माहत्याको सिनहरु देखाइन्थ्यो त्यो कसरी गरिन्छ भनेर हामी तिन जनाले योजना बानायौ र घरको बारतालिमा गएर अबिर लगाएर रगत जस्तो अनुहारभरि बनाएर अब आत्माहत्या गर्न ठिक पर्यौ ।
कसले पहिला हाम फल्ने भन्ने कुरामा झगडा पर्यो र मैले भने गंगा भन्ने साथी सबै भन्दा जेठी थियो तिमि जेठी हौ पहिला तिमि हाम फल भने उल्लाई घचेटदा घचेटदा उ मान्दै मानेन त्यस पछि हामी तिनै जान होस अब हाम नफालौ भनेर झ्यालबाट छिरेर कोठा भित्र आयौ त्यति सारो उत्पट्याङ पनि गरियो। जे होस मर्न चाहि डर लाग्दो रहेछ आत्माहत्या गर्न सजिलो रहेन छ भन्ने कुरो त्यसले प्रुफ गर्यो। त्यो चाहि मुर्खता थियो राम्रो पनि हैन।
तारिफ गर्नु पर्दा कसलाई गर्नु हुन्छ ?
धेरै जना हुनुहुन्छ गुरुहरु साथीहरु तर कुनै एकजनालाइ गर्नु पर्दा चाहि कसलाई गर्ने थाहा भएन।
रिसाएको साथीलाई कसरी फकाउनु हुन्छ ?
– मलाइ पहिला त फकाउनु नै आउँदैन, रिस उठाउनु बेस्सरी आउँछ फकाउनु भने पछि मलाइ पटक्कै आउँदैन म कुनै पनि कुरामा गल्ति गर्दिन बिनाकारण साथीहरु कहिले कहिँ रिसायो भने चुपलागेर बस्छु भरे उनीहरु आफै मलाइ फकाउन आउँछन।
त्यस्तो कुनै फिल्म हेर्नु भाछ हेरेर बेस्सरी रुनु भयो ?
– म सानो हुदा बुहारी फिल्ममा जल शाहको एक्टिङ हेरेर धेरै रोएको थिएँ त्यो नारीले पाएको पिडाहरु देखेर सानो मै रुन्थें म सानो मै फिल्मी थिएँ।
यहाँलाइ के देखि सारै डर लाग्छ ?
– खासै डराउने मान्छे त हैन म तर मैले केहि गल्ति गरेको रहेछु भने चै समाजसंग पनि डराउ छु फ्यामिलीसंग पनि डराउँछु सबैसंग डराउँछु डराउनु जरुरी पनि हुन्छ।
सिंगो राष्ट्रलाइ संदेश दिनु पर्दा के दिनु हुन्छ ?
– राष्ट्रमा धेरै टेन्सनहरु अफ्ठ्याराहरु छन् जेहोस पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो भइ राखेको छ। मैले देश विदेशबाट नेताहरुलाइ धेरै गालि गरेको देखेको छु कसैलाई यो भएन त्यो भएन भन्न धेरै सजिलो हुन्छ तर त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्न गारो हुन्छ खुकुरीको पिर अचानोलाइ मात्र थाहा हुन्छ कि त आफै बसेर गर्नु पर्यो गालि गरेर मात्र केहि हुनेवाला छैन।
विदेशमा रहने नेपालीहरु आफ्नो देश बनाउन सबै फर्किनु पर्यो जति दुख विदेशमा गर्नु हुन्छ त्यो दुख नेपालमा गर्नु भए केहि हुन्छ दुख छ त्यो झेल्नु पर्छ आफ्नै घर हो आफ्नै देश हो सबै मिलेर गरे देशको विकास हुन्छ त्यसैले सबै बिदेशमा भएको नेपालीहरुलाई फर्केर आइदिनुहोस भन्न चाहन्छु।